TAFA-PIFIDIANANA : Kandidà Paul Rabary -
AccueilRaharaham-pirenenaTAFA-PIFIDIANANA : Kandidà Paul Rabary
19/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Kandidà Paul Rabary
Hapetraka ny faritra mizaka tena
Tomombana ny zava-drehetra, miandry ny fahalanian’ny kandidà Paul Rabary sisa ny fametrahana ny fampandrosoana tena izy eny ifotony, amin’ ny alalan’ ny faritra mizaka tena. Efa hita taratra fony izy minisitry ny Fanabeazam-pirenena ny fahaiza-manao sy ny traikefa hananan’ity kandidà laharana faha-8 ity. Nahalalana ny kandidà nandritra ny fampielezan-kevitra nataony, ireo velirano 8 entiny hitantanana sy hampandrosoana ny firenena. Isan’izany ny fanjakana mitsitsy, fanjakana atokisan’ny vahoaka, fampivoarana ny maha olona, sehatra sy andraikitra bebe kokoa ny tanora sy ny vehivavy, fampitomboana ny famokarana, faritra mizaka tena, Madagasikara maha te honina, fampiasana ny teknolojia ho an’ ny fampandrosoana. Hiarahan’ny rehetra mahalala rahateo ny fanenana sy ny fitsitsiana entin’ny kandida amin’ny fitondrana tantanany, tahaka ny fanafoanana ny primatiora sy ny Senat, ary ny fanenana ireo minisitera ho 15 fotsiny.
Ireo rehetra voalaza ireo, na fitsitsiana aza dia mivaly ho fampandrosoana, tsapa izany nandritra ny fanazavana nentin’ ity kandidà ity. Satria tsy hivangongo eto an-drenivohitra intsony ireo rafitra ilain’ ny vahoaka eny ifotony noho ny fametrahana ny faritra mizaka tena, ary tsy ho lany vola mivezivezy, trano sy sakafo ho an’ireo mpandraharaha madinika, na lehibe any amin’ ny faritra. Ireo rantsana tena ilaina eny ifotony amin’ny fampandrosoana noho izany, avy hatrany dia hapetraka any amin’ny faritra, tahaka izany ny rantsan’ny minisiteran’ny Fizahantany , ny mponina, jono, fanajariana ny tany sns. Midika izany fa raha misy ny olana mikasika ny jono, dia voavaha avy hatrany eny ifotony ny olana, ary haingana. Ny rafi-pampianarana sy ny fiofanana arak’asa ihany koa, dia tahaka izany, miankina amin’ ny filan’ ny faritra fa tsy hivangongo eto an-drenivohitra avokoa. Mba ahafahana mametraka ny faritra mizaka tena, dia nambaran’ny kandidà Paul Rabary fa hosokafana, ary hahazaka fiaramanidina goavana ireo seranam-piaramanidina amin’ireo renivohi-paritany enina, mba hampitombo ny fahatongavan’ireo mpizahatany. Toraka izany ihany ihany koa ny seranan-tsambo. Izany hoe ny faritra 22 mihitsy no mitantana mivantana ny hareny, ka tsy ho 5 % intsony ny fanampiana ho azon’ ny kaomina, ary tsy ho roa alina intsony ny karaman’ireo sefo fokontany.
Anatin’ lalàm-panorenana ho an’ny repoblika ho avy izany, dia hitsinjara ny fahefana, ary apetraka ambany fiahian’ny antenimieram-pirenena ireo rafitra mpanara-maso. Midika izany fa hipetraka ho azy ny fanjakana tan-dalàna, ary ho foana ho azy ny kolikoly. Ankoatra izay rehetra izay dia nasian’ i Paul Rabary resaka ihany koa ny mikasika ireo mpamatsy vola, nambarany fa « tsy hiara-hiasa amin’ ireo mpamatsy vola mpaka tombony ambony ao, na ilay antsoina hoe financement Vautour », hoy izy . Mifototra amin’ ny fampielezan-kevitra ankehitriny ny kandidà laharana faha-8, antony tsy ahitana amin’ireo hetsiky ny kandidà etsy sy eroa. Ho azy, rehefa fifidianana no atao, dia atao hatramin’ny farany, ary atokisana ny mpitsara. Amin’ izao mantsy hoy i Paul Rabary, raha baolina kitra no atao dia misy mitady hamadika izany ho baolina lavalava. Niaiky mantsy ity kandidà ity fa tsy tonga lafatra ny zava- drehetra, ka ny mpilalao dia tokony hanapitra ny fe-potoana hilalaovana, fa tsy midongy eo ambony kianja.